Kismaayo News » Gabar Bangaladhesh udhalatay oo ka sheekaysay guurkeeda xasuusta ku reebay
Gabar Bangaladhesh udhalatay oo ka sheekaysay guurkeeda xasuusta ku reebay
Kn: Gabdhaha Muslimiinta waxaa lagu yaqaanna xishood iyo dhowrsanaan, Alle ayaa ku tilmaamay inay yihiin udub dhaxaadka nolasha qoyska ee aasaaska u ah guriga ubadka wanaagsan laga rabo inuu kasoo uskamo.
Nadhiya Xuseen waxay udhalatay Bangaladesh waxay deggan tahay dalka Ingiriiska waa xirfadle cunto karin iyo qorista maqaallada; waxay qayb ka ahayd barnaamijka ay BBC da baahiso ee loo yaqaanno Bake Off oo lagu tartansiiyo sida loo kala yaqaanno dubista cuntooyinka al foornaatiga ah waxay tartankaasi ku guuleysatay seddex sano oo xiriir ah.
Nadhiya Xuseen oo ah gabar reer leh oo deggan magaalada Leeds ee dalka Ingiriiska ayaa ka sheekaysay sida ay isku guursadeen saydeega Cabdalla mar ay ka qayb gelaysay barnaamij ka baxa telefishanka ITV oo looga hadlo arrimaha qoyska oo lagu magacaabo Loose Women.
Iyadoo ah 19 jir, reerkooda kula nool magaalada Luton ayaa aabaheed usheegay in uu jiro qof uu duunaayo inay la sheekaysato. Markii uu aabaheed sidaas usheegay waa ay la kurbootay waxayna ku wareertay halkii ay ka billaabi lahayd. Maalmo kadib waxaa billowday xiriirkii; is fahanka ayaa ahaa mid aad u adag oo lama kala bogan karin sababo xagga masaafada oo aad ukala fog. Waxaa lagu magacaaba Cabdalla oo joogo magaalo ka tirsan Bangaledesh; buuq iyo qaylo kadib Lix bilood ayay sidii ku wada sheekaysteen.
“11 sano ka hor ma jirin Facebook iyo Skype oo qofka si toos ah aad ula xiriiri kartid, waxaa kaliya oo aan ka arkay ha lama laba sawir inta aanan is guursanin” ayay tiri Nadhiya.
Kadib waalidiintooda ayaa qaban qaabiyay in la isku imaado, maalintii ugu horreysay ee ay si caadi isku arkeen waxaaba isla maalintaas dhacay meherkii maalintii xigtayna arooskii ayaa lasoo gabagabeeyay si degdeg ah.
“Aniga waxaan sugayay wakhti dheer aan bal is hor fariisanno laakiin wax walba waxay udhaceen sidii Alle uu qoray la yaab iguma aysan ahayn in sidaas la ii dedejiyo anigoo 19 jir ah” ayay tiri.
“Waxaan xaqiiqsaday xaaladani inay ka adkayd tii aan sugayay, oo nolasha dhabta ah waxay tahay in aad hesho qof kuula diyaar ah inuu ku siiyo nolol farxad leh”
Waxay sheegtay guurkaasi inuu ahaa mid nasiib fiican bilooyin kadib cunuggii ugu horreeyay ayaa caloosheeda galay, waxay u ahayd farxad wayn iyada iyo seygeeda Cabdalla balse waxaa farxadaasi sii ballaaratay markay dhashay cunuggeedi ugu horreeyay oo wiil ah.
Ugu dambeyntii Nadiya iyo Cabdalla waxay farxad ku wada joogaan 11 sano waxay leeyihiin 3 carruur ah Musa oo sagaal jir ah; Dauud oo sideed jir ah iyo Maryan oo 5 jir ah. Waxaay sheegtay inay labadeeda wiil kala wayn yihiin 9 bilood oo kaliya Allaah ayaa mahadaas iska leh ayay tiri.
Nadhiya ayaa intii uu ay barnaamijka Loose women ku guda jirtay heshay farriimo hambalyo iyo bogaadin ah oo lagu dhiiri gelinayo oo ayna mudantahay in lagu daydo.
“Waxaad tahay gabar cajiib ah, wadada aad soo martay waa mid ku dayasho mudan”